WOWOW तेल मालिश कांस्य बाथरूम सिंक नल २-ह्यान्डल2इंच केन्द्र
घर / बाथरूमको नल / डबल ह्यान्डल बाथरूम नल / WOWOW तेल मालिश कांस्य बाथरूम सिंक नल २-ह्यान्डल2इंच केन्द्र
वाह वाह नल १०० प्रतिशत दबाव परीक्षण - उच्च गुण र धीरजको ग्यारेन्टी गर्न सबै ट्यापहरू कठोर उच्च पानीको चापको अन्तर्गत विश्लेषण गरियो। Inch इन्च व्यापक बाथरूम faucets, उच्च गुणवत्ता ब्रास निर्माण सुन्दर प्रिमियर एंड जीवन प्रदर्शन समकालीन लेआउटको लागि डिजाइन गरिएको।
232120RB स्थापना निर्देशन
तेलले कांस्य बाथरूमको नल २ 2321200२१२०० आरबी विवरणहरू ओगटे:
यदि तपाईं हाम्रो भर्खरका उत्पादनहरू विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया लागत मूल्यको लागि हामीसँग सम्पर्कमा हुन नहिचकिचाउनुहोस्।
केन्द्रसिट: लिफ्ट रड र पप अप स्टपरको साथ नल डिजाइन क्लासिक। केवल दुई ह्यान्डलहरू नक्कल बाट्रमको साथ नल बाथरूम: पानीको तापमान नियन्त्रणको साथ पानी सुधार गर्न डबल ह्यान्डल नल सीधा हुन्छ।
SATITARY IN DATIN ASSSMLLY INSSUDED INSSUDED: तेलमा घिचिएको काँसाको बाथरूमको नलमा मेटल ड्रेन असम्ब्ली हुन्छ, पानी नलीको टुप्पोबाट बाहिर निस्किन्छ र लिफ्ट रॉडमा थिचेर तपाईंको हात धुनु हुँदैन।
SINK FAUCET OIL RUBBED BONZE: दुई ह्यान्डल नल डिजाइन शैली क्लासिक रेट्रो। जंग लड्नुहोस्। डेक माउन्ट भ्यानिटी नल भाडा घर, नयाँ कन्डो, एकल-अपार्टमेन्ट, मोटर घर, ट्राभल ट्रेलर र घर प्रयोगको लागि उपयुक्त। यदि कुनै प्रश्न भए कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
SKU: 2321200RB विभाग: बाथरूमको नल, डबल ह्यान्डल बाथरूम नल टैग: स्नानगृह सिंक नल, Centeret lavtory, ईन्च केन्द्रसेट बाथरूम, तेल मालिश कांस्य
तेल मालिश कांस्य
9.2 x 9.1 x 3.9 इन्च
तेल लगाइएको कांस्य
जिंक मिश्र / स्टेनलेस स्टील
नल * १, स्थापना विशिष्टता * १, पप-अप ड्रेन स्टॉपर * १
यो मेरो मनपर्ने आकार हो। योसँग राम्रो प्याकेजि has छ, कुनै हालतमा चोटपटक छैन, र स्थापना गर्न सजिलो छ। मूल्य उचित छ।
मेरो श्रीमान् पर्याप्त स्थापित गर्न सक्षम थियो! म यस खरीदसँग खुसी छु। यो यो भन्दा धेरै महँगो देखिन्छ र म यसमा यति धेरै प्रशंसा प्राप्त गर्छु। शीर्ष निशान ग्राहक s
यस नलबाट धेरै सन्तुष्ट। जब तपाईं नल बन्द गर्नुहुन्छ, चुम्बकले राम्रोसँग काम गर्दछ र स्प्रिंकलरलाई भित्र राख्न सक्दछ। मसँग नलको बारेमा कुनै गुनासो छैन।
टी *** आर2020-06-15
राम्रो ब्रान्डको किचनको नल पत्ता लगाउन गाह्रो छ जुन पछाडि सर्दैन। मैले केवल एक हप्ताको लागि नलको प्रयोग गरेको छु र यसले अहिलेसम्म राम्रो गरिसक्यो।
उत्कृष्ट गुणवत्ताको बाथरूम नल स्थापना गर्न सजिलो। मैले यो मेरो फिश ट्या tank्क पानी परिवर्तकको लागि खरीद गरें जुन यो पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ! मैले साँच्चिकै रमाईलो गरें!
सजिलो स्थापना र राम्रो देखिन्छ! आधा लागतको लागि धेरै उत्तम हेर्नुहोस् जुन तपाईले घर सुधार स्टोरहरूमा पाउनुहुनेछ
मूल्यको लागि यस नललाई हराउन गाह्रो। मेरो खरीद संग धेरै खुसी।
अनुमानित वितरण मिति भन्दा छिटो आयो। धेरै राम्रोसँग बक्स गरिएको। सुपर स्थापना गर्न को लागी सजिलो, र धेरै उत्कृष्ट देखिन्छ। मैले एक डेल्टा नल बदलें, जसको लागत X X जति बढी भयो, र यो नयाँ राम्रो देखिन्छ र स्थापना गर्न सजिलो थियो। धेरै प्रभावित।
एल *** बी2020-07-14
उत्कृष्ट हेर्ने उत्पादन जुन स्थापना गर्न सुपर सजिलो थियो। राम्रो समाप्त र राम्रोसँग काम गर्दछ।
भारी राम्रो गुण, राम्रो सुरक्षा प्याकेज मा आयो। ह्यान्डलको राम्रो चाल र नालीको लक। फेरि किनेको छ र यो एक महिना को लागी स्थापित गरेको छ।
राम्रो उत्पादन !! सुपर सजिलो स्थापना। मैले यसलाई मेरो आर.वी. मा नल बदल्न प्रयोग गर्‍यो र यो राम्रो छ, म मेरो घरमा बाथरूमको नल बदल्नको लागि बढी किन्दै छु।
राम्रो गुणस्तर, पानी को एक राम्रो धारा को लागी बनाउँछ, अन स्क्रू aerator गर्न सजिलो, सुन्दर डिजाइन। याद गर्नुहोस् कि एक घुँडा अर्को भन्दा कम छ। एक सजिलो फिक्स हुनु पर्छ। समग्रमा, WOWOW को लागी महान मूल्य कुनै निराश बिना। राम्रो खरीद!
क्वालिटी, हेर्न र स्थापनाको सजिलोको साथ रोमाञ्चित ... कि म अर्को सिink्क को लागी एक सेकेन्ड किन्छ!
पानी अन / अफ सटीक छ। हेर्नुहोस् सफा र उत्तम छ। प्रेस नाली प्रेम! पुरानो लीभर-पुल ड्राईन भन्दा धेरै सजिलो र अधिक प्रभावकारी भयो जुन यसलाई बदलियो!
स्थापना यति सजिलो थियो कि म मेरो १-वर्ष पुरानो स्थापना (कोर्सको मेरो सुपरिवेक्षणको साथ) गर्‍यो। यस खरीदसँग धेरै खुसी छ।
मूल्य धेरै प्रतिस्पर्धी हो र मलाई स्ट्र्रेनर डिजाइन मनपर्दछ। केन सबै क्षेत्र सुरक्षित संग प्याक। विक्रेता कृपया प्याकेजि change्ग परिवर्तन नगर्नुहोस्। राम्रो काम। निश्चित छैन तर यी मसँग भएको अन्तिम faucets भन्दा बढी शान्त देखिन्छ।
एकदम सुन्दर! शानदार काम गर्दछ। लम्बाई र अगाडि बढ्छ त्यसपछि एक म पहिले थियो। मेरो अनुप्रयोगको लागि उत्तम। गुणवत्ता समाप्त! प्लास्टिक होइन। भारी शुल्क! मेरो खरीद संग धेरै खुसी!
जे *** ई2020-09-01
यो नल उच्च गुणवत्ताको छ। अर्को खरीद गर्न कोशिस गरे र सबै सकिए। मलाई लाग्छ म मात्र एक मात्र थिइन जसले यसलाई मनपरायो।
मेरो नयाँ घरमा सारियो जुन DISGUSTING सिंक थियो। यो राख्न यो सजिलो थियो र यो अचम्मको देखिन्छ!